म एउटा ख्रीष्टियान हुँ र मेरो केही भन्नुछ : NepalChurch.com
[0] February 6, 2017	| Jagadish Pokhrel
एउटा व्यक्तिको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार हो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार खोसिएको व्यक्ति कदापि खुसी हुन सक्दैन । जतिसुकै असल ठाउँमा पुगेको भए पनि स्वतन्त्रताको अधिकार गुमाएको व्यक्ति सुनको पिंजडामा थुनिएको सुगाजस्तै बन्छ ।
यही व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकारमा टेकेर आज कोही डाक्टर बनेका छन्, कोही शिक्षक बनेका छन्, कोही देशमै काम गर्दैछन् अनि कोही विदेशमा । एउटालाई शर्ट लगाउन मन पर्छ, लगाउँछ, अर्कोलाई टिशर्ट लगाउन मन पर्छ, उसले पनि लगाउँछ । कोही मोटरसाइकल चलाउँछन् त कोही स्कुटर, कसैलाई चलचित्र मन पर्छ त कसैलाई खेलकुद । म निलो रंगको झोला बोक्छु भन्दैमा तपाईंले पनि यस्तै बोक्नुपर्छ भनेर मैले तपाईंलाई दवाव दिन मिल्दैन । त्यो तपाईं मात्रै हो, जसले तपाईंको व्यक्तिगत कुराहरूको निर्णय गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ, त्यो म मात्रै हुँ, जसले मेरो व्यक्तिगत कुराहरूको निर्णय गर्ने अधिकार राख्छु ।
धर्म पनि व्यक्तिको विल्कुल व्यक्तिगत मामला हो । कुन धर्म मान्ने भनेर छान्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको छनौटको कुरा हो । रामबहादुरको धर्म निर्क्यौल गर्ने जिम्मा र अधिकार दुवै रामबहादुरलाई नै दिइनुपर्छ । स्वेच्छाले कोही ख्रीष्टियान हिन्दु बन्छ वा कोही हिन्दु ख्रीष्टियान बन्छ भने त्यसमा आपत्ती जनाउनुपर्ने कारण रहँदैन ।
म आफ्नै इच्छाले आजभन्दा १३ वर्षअघि ख्रीष्टियान बनेको हुँ । कसैको कुनै लोभ वा प्रलोभनमा परेर म ख्रीष्टियान बनेको थिइनँ । यति हुँदाहुँदै पनि विगत १३ वर्षमा मैले सयौंपटक तिरस्कारका आवाजहरू सुनेको छु । ख्रीष्टियानहरू यस्ता हुन्, त्यस्ता हुन्, बाइबल पढ्दा पागल भइन्छ, यो विदेशी धर्म हो, धर्म फेर्नु भनेको आमा बेच्नुसरह हो, अनि अझै के के हो के के ।
ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा पोहोर साल नेपालले अमेरिकालाई ६ विकेटले हराउँदै गर्दा अरूहरू झैं मेरो मुखबाट पनि “एस” शव्द निस्केको थियो । त्यही “एस” शव्द निकाल्ने मन तब तब टुक्रिएर आउँछ, जब यही धर्तीका सन्तानहरूबाट “तिमीहरू अमेरिकी वा यूरोपियनका दलाल हौ” भनेको सुन्नुपर्छ ।
दशकौंदेखि ख्रीष्टियानहरूले गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य र सामाजिक विकासका अनेकौं कामका निम्ति यो भूमिमा पसिना बगाएका छन् । अर्बौं लगानी कुनै नतिजा ननिकाली बालुवामा पानी झैं बन्ने गरेको यो देशमा सामाजिक विकासका निम्ति कठोर मिहिनेतका साथ् ख्रीष्टियानहरूले खडा गरेका सयौं संघसंस्था तथा समूहहरूले प्रष्ट देखिने गरी नतिजा हाँसिल गरेका छन् । कुनै संकटमा परेको दृष्टिबिहिनले बाटोको छेउमा बसेर हात पसार्दा खल्तीमा सिक्का छ कि छैन भनेर छाम्ने संस्कार बोकेकाहरूले भरिएको यो देशमा दशकौंसम्म दुरदराजमा पुगेर विपन्नहरूका पक्षमा काम गर्नेहरूको कामको कुनै कदर गरिएन । आफ्नो छाक काटेर अनाथका पेट भर्नेहरू सधैं दलाल नै बनिरहे । आफ्नो सारा जिन्दगी त्यागीएका वृद्धवृद्धाहरूको सेवामा लगाउनेलाई यौन व्यवसाय चलाउनेको संज्ञा दिनसमेत् पछि परेन यो समाज ।
कतिपटक त हाम्रा मानिसहरुको सोचाइ देखेर मलाई बैराग लागेर आउँछ । जनताको रगत चुसेर भ्रष्ट्राचारमा लिप्त मान्छेहरू, अख्तियारको दुरुपयोग गरी सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ती थुपार्नेहरू राष्ट्रवादी कहलाइने यो देशमा दोश्रो दर्जाको नागरीक बन्नबाट जोगिनलाई हामीले के गर्नुपर्छ होला? कसैले हामीलाई बताइदिनुहोस्, अरू कति दु:ख गरेपछि, अझै कति पसिना बगाएपछि हामीलाई दोश्रो दर्जाबाट उम्कन दिइनेछ ? मेरो प्रश्न मेरो समाजलाई ।
विधवा अथवा टुहुराबाट फाइदा नलेओ । फाइदा लियौ र तिनीहरूले मेरो पुकारा गरे भने, म निश्‍चय नै तिनीहरूको पुकारा सुन्‍नेछु । प्रस्थान २२:२२–२३
मेरा भाइ हो, प्रभु येशू ख्रीष्‍ट, महिमाका प्रभुमाथि तिमीहरूको विश्‍वास भएको हुनाले तिमीहरूले कुनै भेदभाव नदेखाओ । यदि कोही मानिस सुनका औँठीहरू र राम्रा-राम्रा लुगा लगाएर तिमीहरूको सभामा आयो, र कुनै एक जना गरीब पनि झुत्रे-झाम्रे लुगा लगाएर आयो भने, तिमीहरूले त्‍यो राम्रो लुगा लाउनेलाई आदर गरेर, “यहाँ राम्रो ठाउँमा बस्‍नुहोस्” भन्‍छौ, र त्‍यस गरीबलाई चाहिँ “तँ त्‍यहीँ उभि” अथवा “मेरा पाउनेर बस्” भन्‍छौ भने, के तिमीहरूले आफ्‍नै बीचमा भेदभाव देखाएनौ, र कुविचार भएका न्‍यायकर्ता भएनौ र? याकूब २:१–४
हामी ख्रीष्टियानहरू यो देशको दुस्मन होइनौं । हामी लडेको नेपाल होइन, बढेको नेपाल चाहन्छौं । मातृभूमिप्रतिको हाम्रो कर्तव्य हामीले भूलेका छैनौं । आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रयोग गर्दैमा हामीमाथि दोश्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार नगरियोस् भन्ने हाम्रो सादर अनुरोध छ ।
गल्ती मान्छेले गर्छ, हामी पनि मान्छे हौँ र हामीबाट पनि कयौं भूलहरू भएका हुनसक्छन् । कतिपय अवास्थामा जानेर वा नजानेर हाम्रा कदमहरू गलत भएका पनि हुनसक्छन् । हामी ख्रीष्टियान हौँ, अनि हामी कसैलाई घृणा गर्दैनौं । यदि कुनै ख्रीष्टियानले अरूप्रति घृणा ओकलेको छ भने त्यो बाइबल नबुझ्नुको परिणाम हो ।
मित्रहरू, आउनुहोस्, हाम्रा गल्ती कमजोरीहरूलाई औंल्याउनुहोस्, हामीलाई सच्याउनुहोस् । हामी बिचमा दुस्मनी होईन, भाइचाराको विकास गराऔं र देशको समृद्धिको लागि सँगसँगै लडौं ।
« Praises and worship concert by Kathmandu youth boosted their faith
भावी पुस्तालाई तयार पार्नु »